Home Wararka Farmaajo “CC Shakur waa calooshiis u shaqeyste”
Farmaajo “CC Shakur waa calooshiis u shaqeyste”
Qasab ku dhageysta Khudbadda Madaxweyne Farmaajo oo Telephone-da banaanka ku reeba, ayaa xalay ka dhacday Villa Somalia.
Koox dhallinyaro oo si haddii loo dhigo ay ka badnaayeen masuuliyiinta la casuumay ayaa xalay Casho loogu sameeyey qeyb kamid ah Madaxtooyadda, cashadaas waxaa soo agaasimay xaafiiska Madaxweyne Farmaajo.
Si bulshada looga qariyo hadallo aan ka fiirsi laheyn oo kasoo baxay afka Madaxweynaha ayaa telephone-da looga qaaday (Looga reebay) dhallinyarada oo mararka qaar ku caajisayey halka Munaasabaddu ka dhacaysay.
Wajigiisa oo ay ka muuqato Caro ayuu dhowr jeer sidan ku yiri dhallinyaradda.
Waxuu ku faanay in uu Gabre oo Soomaali dhibay dalka ka saaray isagoo dhahay “Mid dadka Soomaaliyeed dhibay oo urur goboleedka ku magacaawnaa ayaa ka ballan qaaday inaan eryi doono, waana eryay”, kadib sacab ayaa xigay qofkii warkaas ku qancay iyo midkii aan ku qancinba, illeen telephone-dii waa laga aruursadaye.
Waxuu kaloo sheegay in siyaasiyiinta mucaaradka ah aysan wadaniyaal aheyn, sababtana waxuu ku sheegay in ay dowladda kasoo horjeedaa kulligoodna ay wataan dowlado dano gaar ah ka leh Somalia, kadib sacab ayaa xigay qofkii warkaas ku qancay iyo midkii aan ku qancinba, illeen telephone-dii waa laga aruursadaye.
Waxuu kaloo ku faanay in isaga aysan jirin dowlad wadatay badalkeeda waxuu shegay in shacabka ay wateen, kadib sacab ayaa xigay qofkii warkaas ku qancay iyo midkii aan ku qancinba, illeen telephone-dii waa laga aruursadaye.
Waxuu kaloo ku faanay in go’aanno adag uu ka qaatay wax badan oo qaarkood halis galin kartay maamulkiisa balse uu go’aansaday in uu u bareero, kadib sacab ayaa xigay qofkii warkaas ku qancay iyo midkii aan ku qancinba, illeen telephone-dii waa laga aruursadaye.
Dadka sida shaqsiga ah uu carabka ugu dhuftay waxaa kujiray Madaxweyne Farmaajo waxaa kamid ahaa Cabdiraxmaan Cabdishakuur warsame oo uu ku sheegay Madaxweynuhu in uu yahay calooshiis u shaqeyste aan marna wax ka ogeyn danaha dalka dalka, qosol iyo sacab aan la isku waafaqin ayaa halkaas ka dhacay.
Kadib waxaa xigay biya badan oo uu cabay Madaxweyne Farmaajo, illeen wax badan ayuu hadlaye.